Kooraskan waxaa loogu talagalay dadka xiisaynaya qalliinka buurnaanta, sababtoo ah daaweyntan waxaa loo qorsheeyay naftooda ama qof ay jecel yihiin, ama xitaa sababtoo ah, xirfadle daryeel caafimaad, waxay jeclaan lahaayeen inay ogaadaan wax badan. Koorasku wuxuu daboolayaa tilmaamaha, waxtarka, caqabadaha iyo khatarta, diyaarinta iyo farsamooyinka qalliinkan.
Waxaad raaci doontaa sheekooyinka Gaëlle, Julie iyo Paul qaab sawir-gacmeed; Waxaad ka jawaabi doontaa su'aalaha waxaadna raaci doontaa jawaabaha khubarada qaab muuqaal ah.
Qalitaanka buurnaanta Diisambar 10, 2021Tranquillus
horeJimicsiga fekerka muhiimka ah: xogta beenta ah iyo sababaynta
socdaBarnaamijka shayga Immersive ee Pharo